China Umququzeleli woTsalo lwe Bamboo abaXhasi kunye nabaPhathi beziQinisekiso
I-china Bamboo Drawer Organiser, i-China Bamboo Drawer Organiser abaxhasi kunye nabavelisi bencwadi - Isiseko soKhetho olukhulu lweMveliso yeDraw ye-Bamboo kumququzeleli wedraw, abahlukanisi beedraw ze-bamboo, umququzeleli wedraw ekhitshini ovela kwiFujian Bridge Style Furnishings Co, Ltd ...
Kutheni iimveliso zeBamboo zenza indlela yokuphila ezinzileyo?
Iiplastiki ezilahlwayo zezinye zehlabathi ezinegalelo elibi kunkunkuma. Inani elothusayo leplastiki lisetyenziswa kube kanye kwaye liphelela elwandle, imilambo, amahlathi kunye neendawo zokulahla inkunkuma. KwiNdlela yeBhulorho, siyayikhathalela iplanethi kwaye siyazi ukuba nawe uyayikhathalela. Kungenxa yoko le nto sizinikele ekunikezeleni ngokonwaba, ...
Siza kudibanisa zonke iimpahla kwigumbi lethu lokugcina izinto, emva koko senze uhlolo olusemgangathweni kwindawo yokugcina izinto, kwaye sikubonelele ngengxelo yohlolo lobungcali. Ukuba uthenga isampulu, siya kuqala kuphela ukuveliswa kwemveliso emva kokuqinisekiswa kwakho. Iinkcukacha ziyafana nesampulu yo ...
I-China Bamboo Kitchenware Ihowuliseyili-Khetha iimveliso ezingama-2021 ezikumgangatho ophezulu zeBlue Kitchenware ngexabiso elihle kubavelisi bokuphumeza ikhitshi laseTshayina. Uhlobo lweBhulorho lubonelela ngento eyahlukileyo yoyilo: Umququzeleli wedraw ye-bamboo Ukuqamba ibhodi yokusika I-bamboo charcuterie cheese server & nb ...
Isampulu yokubuyiselwa kwesampulu kathathu kunye ne- $ 100 yesaphulelo somyalelo
ngomphathi ku 21-02-28
Uhlobo lweBhulorho Yenza iNyuselo eNtsha: 1.Umbuyiselo mali weOrder amaxesha amathathu kwisampulu yentlawulo (ngaphandle kwentlawulo yokuthumela) 2.Order isaphulelo $ 100 Into nganye. Unokukhetha enye yale misebenzi ingasentla ibhodi yokusika i-bamboo / umququzeleli wedraw ye-bamboo / ibhodi yeshizi ye-bamboo / i-bamboo kitchenware / indawo yokugcina i-bamboo
Qalisa kwakhona isaziso somsebenzi
Bathandekayo Bonke, Enkosi ukuqaphela ukuba siqale ukusebenza nge-18, Feb, 2021. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kuba unayo ngokupheleleyo. Enkosi kwaye konke ku. Uhlobo lweBhulorho